जिग्री पाडेले भद्रगोल जस्तै नयाँ टेलिश्रृंखला ल्याउदै, असोज २ देखि नेपाल टेलिभिजनमै हेर्न पाइने ! – ताजा समाचार
जिग्री पाडेले भद्रगोल जस्तै नयाँ टेलिश्रृंखला ल्याउदै, असोज २ देखि नेपाल टेलिभिजनमै हेर्न पाइने !
काठमान्डौ , हास्य टेलीशृंखला बाट बाहिरिएको भद्रगोल टिमले नया टेलिशृंखला बनाउने भएको छ । मिडिया हबले भद्रगोलको ट्रेडमार्क अफ्नो नाममा दर्ता गरेको कारण यो टिमले नया शृंखला बनाउन लागेको हो । कुमार कट्टेल जिग्री र अर्जुन घिमिरे पाडेको लेखन निर्देशनमा निर्माण हुन् लागेको शृंखलाको नाम भने गोप्य राखिएको छ ।
उक्त शृंखला असोज २ देखि नेपाल टेलिभिजनमै आउने बताइएको छ । उता नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने चर्चित हास्य टेलिश्रृंखला भद्रगोल ६ हप्तापछि पुन प्रशारणमा आयो । तर, गत शुक्रबार प्रशारित नयाँ एपीसोडले दर्शकलाई खुशी पार्न सकेको भने देखिएन ।
गत शुक्रबार प्रशारित २ सय २० औं एपीसोडको कथा पुरानै एपीसोडहरुको निरन्तरता जस्तो गरी बुनिएको छ । तर, दर्शकलाई बाँधेर राख्ने खालको कथावस्तु छैन । साथै, पुरानो टिमका कोही पनि नहुँदा दर्शक निराश बनेका हुन् ।यूट्यूवमा भद्रगोलको उक्त एपीसोड छैटौं नम्बरमा ट्रेन्डिङ छ ।
यसले झण्डै सात लाख भ्यूज पनि पाएको छ । तर, उत्पादकका लागि चिन्ताको विषय के भने यसमा लाइकभन्दा धेरै संख्यामा डिसलाइक आएका छन् । अहिले यो समाचार तयार पार्दा यूट्यूवमा सो एपीसोडमा १७ हजार लाइक र २४ हजार डिसलाइक देखिएका छन् ।
यति मात्र होइन, यसमा आएका १२ हजार भन्दा बढी प्रतिक्रियाहरुमध्ये अधिकांश नकारात्मक छन् । अधिकांसले पुरानो टिमलाई फर्काउने माग गरेका छन् । कतिपयले अब भद्रगोल नहेर्ने घोषणा पनि गरेका छन् ।उत्पादक मिडिया हवसँग विविध विषयमा कुरा नमिल्दा जिग्री-पाँडेको समुह भद्रगोलबाट अलग भएको हो ।